Home Wararka Farmaajo oo dardar geliyay Burburinta Dowlad Goboleedka Galmudug (Video)
Farmaajo oo dardar geliyay Burburinta Dowlad Goboleedka Galmudug (Video)
Iyada oo mudo laga joogo shan bilood ay Dowlada Fedaraalka magacaawday Madaxweyne Maqaarsaar ah Axmad Maxamed Xassan Baasto oo lagula dagaalayay Madaxweynaha rasmiga ee Galmudug Axmad Ducaale Xaaf ayaa mgacaabistaas waxaa ka so horjeestaday shacabka ku dhaqan Galmudug iyo xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug.
Madaama uu Farmaajo ku fashilmay talaabada uu Madaxweyne cusub uu ugu magacaabay Galmudug ayaa waxa uu hadana bilaawday in uu lacag u isticmaalo sidii loo bur-burin lahaa maamulkii Dhuusamareeb. Waxaa qarash lagu bixiyay in dalka dibadiisa loo diro qaar ka mida Mas’uuliyiinta Dowlad Goboleedka Galmudug oo uu u horeeyo Shiikh Shaakir si loo muujiyo in uusan maamul ka jirin degaanka Galmudug.
Dhanka kale Milkiilaha Dowlada Soomaaliya Fahad Yasin ayaa kula kulmay magaalada Nairobi Madaxwenye Xaaf isaga oo balan qaaday in uu soo afjarayo dagaalka lagu hayo Dowlad Goboleedka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa oo shalay ku soo noqday Magaalada Galgacyo ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo wuxuu sheegay in illaa iyo haatan aanay waxbo ka qabsoomin wadahadalladii madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada ee magaalada Garoowe.
Xaaf ayaa dhanka kale sheegay in Galmudug iyo maamuladda kalaba isku tashanayaan, islamarkaana bilaabi doonaan wax soo-saarkooda si ay wax u qabsadaan.
Xaaf ayaa sidoo kale sheegay in ay bilaabi doonaan dhismaha dekadda Hobyo, dhaka kalena iska difaaci doonaan wax walbo oo dhanka dowladda kaga yimaada.